Somaliland oo DFS uga dacwootay Beesha Caalamka Doorashada 20/21 Awgeed!
Anti-Khat lawyer deported from Somaliland
Al-Shabaab’s income is “enhancing” amid assaults by SNA and AU
“The surprise of the Tanzanian presidential election could come from…
DG Galmduug oo maanta Bandow gelisay Degmada Caabudwaaq! –
Banaanbax ka dhan ah Hogaamiyaha France oo Gaalkacyo ka
Talyaaniga oo Askarta Uganda ku bogaadiyay Howlgalkooda
Qaybo badan oo kamid ah Dalka waxaa ka socda abaabulka
By axadle	 On Sep 21, 2020
Warsaxaafadeed kasoo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay in Beesha Caalamka ay u gudbisay Dacwad ka dhan ah Dowladda Federaalka oo salka ku heysa Doorashada dalka 20/21 ee dhawaan heshiiska laga gaaray.
Somaliland ayaa Xaanshidaan gaarsiisay Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo dhammaan Daneeyaasha Arrimaha Soomaaliya, si ay ula socdaan dacwadda ka dhanka ah Dowladda Federaalka.
Maamulka Somaliland ayaa ku doodaya in uu Soomaaliya ka go’ay 18-kii May 1991-dii, waxaana sanadkaas uu ku beegan yahay markii ay dhacday Dowladdii Militariga ahayd ee dalka maamuleysay 21-ka sano.
Balse Somaliland ma aysan helin Aqoonsi, waxaana qoondada Beesha Caalamka lagu siiyaa qayb kamid ah Soomaaliya, halka Xubno deegaan ahaan kasoo jeeda ay qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee hay’adaha DFS.
Golayaasha Shacabka, Aqalka sare iyo Wasiirada ayay shax kuraas ah ku leedahay Somaliland, waxaana doorashadooda lagu qabtaa Magaalada Muqdisho Caasimadda Dalka, maadaama aysan suuragaleyn in Hargeysa lagu qabto.
Maamulka Talada Somaliland haya ayaa marar badan sheegay in aysan qayb ka ahayn howlaha siyaasadda ee Dalka, balse waxaa arrintaas waxba kama jiraan ku tilmaamay xubnaha deegaan ahaan kasoo jeeda ee xilalka ka duwan ka haya DFS.
axadle 1123 posts
Former Prime Minister meets with Senate Speaker Abdi Hashi in Mogadishu
The Prime Minister of Somalia has been approved by the Head of Parliament
DG Galmduug oo maanta Bandow gelisay Degmada Caabudwaaq!…
ISLAAM NACAYBKA France Oo Kubadda Cagta Galay &…
Waa Kuma Xiddiga Real Madrid Ee Uu Benzema Ku Eedeeyey Inuu
DG Galmduug oo maanta Bandow gelisay Degmada…
ISLAAM NACAYBKA France Oo Kubadda Cagta…
Waa Kuma Xiddiga Real Madrid Ee Uu…
Anti-Khat lawyer deported from…